နေသာတဲ့နေ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » နေသာတဲ့နေ့…	10
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 31, 2015 in Poetry | 10 comments
.ထမင်းမဝတဲ့သူတို့… ဟင်းတွေပါ ဝလာမယ်..
.စစ်ဘေးဒဏ်သင့်မြေမှာ…. ပန်းတွေပါ ပွင့်လာမယ်…
.ပြိုပျက်နေတဲ့ ကျောင်းအိုမှာ စာအံသံတွေ တစာစာ…ကြားရမယ်…
.ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီကနေ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ယာဆီ .တည်ငြိမ်စွာ ပြန်လာကြမယ်…
.ဟောဟိုက ကလေးငယ်တွေဟာ ရေသန့်ဗူးခွံတွေအစား ကိုယ့်သယံဇာတ .ကိုယ်ကောက်မယ်…
.ငါတို့တတွေရဲ့ အသက်ကို .ငါတို့အခွင့်အရေးနဲ့ငါတို့ စောင့်ရှောက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်…
.ငါတို့ လယ်ယာကန်သင်းကို … စစ်ဖိနပ်မပါတဲ့ ငါတို့ ခြေဗလာနဲ့ ငါတို့ကိုယ်တိုင် .နင်းကြမယ်…
.ဒီနေ့ မဖြစ်ပျက်လိုက်ရသမျှ ကောင်းခြင်းတရားတွေနဲ့ တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် .သာယာချမ်းမြေ့လိုက်ကြမယ်…
.မနက်ဖြန်မှာ … ဒီနေ့ဟာ ကပ် ပါမလာဘူးဆိုရင်ပေါ့….
သြဂုတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
image > http://www.google.com.mm/search?hl=my&biw=1366&bih=608&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=sun+light+paint&oq=sun+light+paint&gs_l=img.3…32988.34580.0.35157.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0….0…1c.1.64.img..0.0.0.kQ2VOewyNCU#imgrc=unVDs7-DMMR3gM%3A
komyominaung says: အရမ်းထိမိတဲ့ ကဗျာလေး ကြိုက်တယ်ဗျာ အားပေးနေတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်… .အခုနောက်ပိုင်း ကဗျာတို စာတိုလေးတွေပဲ…ရေးဖြစ်နေတယ်ဗျ…
အောင် မိုးသူ says: နေသာတဲ့နေ့ကို……… စောင့်နေတုန်းပဲ
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီက….စောင့်နေသူ…. ပေါ့လေ…
.စောင့်နေတာထက်… နေသာဖို့….နေ သာမယ့်အခြေအနေကိုလည်း
Courage says: အမေစုရဲ့ စကားကို မှီးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
“တစ်ကယ်စေတနာရှိပြီး စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမယ်ဆိုရင် နေသာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဟာ ရောက်ရမှာမလွဲပါဘူး”
အားလုံး တက်ညီလက်ညီ ဘက်ညီညီနဲ့ လုပ်ကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်တို့ အားနည်းချက်ထဲမှာ…
အဲ့ဒီ တက်ညီ လက်ညီ ဘက်ညီညီနဲ့ ….ပူးပေါင်း ချီတက်နိုင်စွမ်း နည်းတာလည်း ပါမယ်ထင့်….
.လျှောက်နေကျ….. လေးတိလေးကန်….မိရိုးဖလာ ခြေလှမ်းတွေကို…
ခပ်မြန်မြန် ပြောင်းလဲပစ်ပြီး…. ခြေလမ်းသစ်တွေ…
Mike says: .ဘယ်တော့များမှ နေသာပါ့မလဲ
Alinsett @ Maung Thura says: .နေသာမယ့်နေ့…
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိုက်မိုက်က ဝါးလုံးကျော်ကို စောင်းပြေါတာလား။
အတွေးလေး says: မနက်ဖြန်သို့မဟုတ်ဘယ်သောခါ လားဗျာ။